DEG DEG:- Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo dib u noqday kadib cilad ku timid diyaaradii uu saarnaa – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DEG DEG:- Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo dib u noqday kadib cilad ku timid diyaaradii uu saarnaa
Wafdi uu hogaaminaayo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo maanta la filaayay inay soo gaaraan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa diyaaradoodii dib u laabatay kadib markii ay cilad ku timid.
Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ayaa ka mid ahaa madaxda ka qeyb gali lahayd shirka madaxda urur goboleedka IGAD oo haatan si toos ah uga furmay Hoteelka Peace ee ku yaala garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
Safiirka Jabuuti ee u fadhiya dalka Soomaaliya Danjire Aadan Xasan Aadan oo goordhaw la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in cilad farsamo ay soo wajahday diyaaradii uu saarnaa madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle, kadibna ay dhexda ka laabatay.
“Diyaaradii uu saarnaa madaxweynaha qaranka Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle, dhexda ayay ka laabatay kadib markii ay ku timid cilad farsamo, wuxuuna qorshuhu ahaa inuu ka qeyb-galo shir madaxeedka IGAD, balse haatan waxaa booskiisa matali doono wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti mudane Maxamuud Cali Yuusuf” Sidaas waxaa yiri safiirka Jabuuti ee u fadhiya Soomaaliya Danjire Aadan Xasan Aadan.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf ayaa saakay ka mid ahaa wufuudii ugu horeeysay ee soo gaartay magaalada Muqdisho, islamarkaana lagu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee Muqdisho.
Dhinaca kale, ammaanka garoonka Aadan Cadde ayaa ah mid aad loo adkeeyay, waxaana haatan xarunta shirka ee ku taalo Hoteelka Peace ee garoonka Aadan Cadde si toos ah uga socdo shirka madaxda urur goboleedka IGAD oo la filaayo in gelinka dambe maanta lasoo gaba-gabeeyo.